Inkampani yethu yasungulwa ngo-2005 futhi ikomkhulu lise shijiazhuang okuyindawo enhle yaseChina. Ibhizinisi eliyinhloko lifaka phakathi ukukhiqizwa nokuthengiswa kwemikhiqizo eyenziwe ngamakhemikhali nezimayini, kanye nokuthekelisa ubuchwepheshe be-chlorine dioxide. Inkampani yethu, ihlose ukusebenza okungaguquguquki nentuthuko esimeme, igcizelela njalo okholweni ukuze yakhe umkhiqizo omuhle wenkampani futhi iwine imakethe namakhasimende anekhwalithi enhle yomkhiqizo nensizakalo engagodliwe.
Le nkampani ihambisana njalo nenqubo yokwethembeka okuhle
Ukunqoba imakethe namakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme.
Thola ukwethenjwa nokusekelwa kwakho ngemisebenzi yethu eqotho nemikhiqizo esezingeni eliphakeme